htaccess: Nche folda na Redirect na Regex | Martech Zone
htaccess: Warara nchekwa na Redirect na Regex
Tuesday, August 6, 2013 Mọnde, Febụwarị 1, 2016 Douglas Karr
Ime ka usoro URL gị dị mfe bụ ụzọ dị mma iji bulie saịtị gị maka ọtụtụ ebumnuche. Ogologo URLs siri ike ịkọrọ ndị ọzọ, enwere ike iwepụ na ndị editọ ederede na ndị editọ email, na ihe owuwu folda URL dị mgbagwoju anya nwere ike izipu akara ngosi na-ezighi ezi iji chọọ engines na mkpa ọdịnaya gị.
Ọ bụrụ na saịtị gị nwere URL abụọ:
Kedu nke ị ga-eche na o nyegoro isiokwu a? Ihe atụ mbu nwere nkewa n'etiti edemede na ibe obibi nke ọkwa 5. Ọ bụrụ na ị bụ igwe nyocha, ị ga-eche na nke a bụ ọdịnaya dị mkpa?
Maka ebumnuche ndị a, anyị na-eme ka ọtụtụ n'ime nchekwa folda ndị ahịa anyị dị mfe. Fọdụ nwere ike ịrụ ụka na otu ụdị slugs na isiokwu dị mma, mana anyị ahụbeghị nke a na ndị ahịa anyị. Ndị isi na ọnụọgụ nke njikọ sitere na peeji nke ụlọ emeela ka ọkwa dịkwuo mma na ọdịnaya anyị ama ama.
Mgbe emejuputara blog, obu ezie na o bu ihe mgbu iwepu ihe ndia nile gha adigide ma megharia okporo uzo nke uzo di ugbua na uzo URL ohuru. Na Flywheel (Mgbakwunye njikọ), anyị nwere ike ịnwe ka ndị otu ha na-ejikwa rediregharị anyị ma ọ bụ na anyị nwere ike iji ngwa mgbakwunye redirection.
Nke mbụ, anyị na-ewe mmadụ n'ọrụ Yoast's WordPress SEO ngwa mgbakwunye ka anyị wee yipu nkịtị udi slug pụọ na URL ahụ.
Ọzọ, anyị na-emelite permalinks ma wepu /% udi% / ma hapụ /% post% / n'ọhịa (ma mee ka oghere dị ọhụrụ).
Ikpeazụ, anyị ga-agbakwunye okwu mgbe niile iji weghachite folda ahụ:
Okwu a nwere nhọrọ nhọrọ gị edepụtara (folda1, folda2, folda3) ma chọọ ederede ụfọdụ mgbe ụdị ahụ your otu a ka ibe gị ga - agaghị agbaji mana isiokwu ndị nwere onwe ha ga - aga n'ihu na URL ọhụrụ ahụ.
Amaghị m na m ga-akwado mgbanwe a siri ike maka ụlọ ọrụ ọ bụla. Ndị nwere ogo n'ọkwa nwere ike ọ gaghị achọ itinye nke a. Na obere oge, ọ nwere ike imerụ ogo gị ebe ọ bụ na redirect anaghị ebugharị ikike niile nke ibe mbụ. Mana ka oge na-aga, ịnwekwu ọdịnaya dị elu na ndị isi gị nwere ike inyere gị aka. Anyị maara na enyere ya aka Martech Zone!
Tags: 301 redirectudi regexife efehtaccessNtughari htaccesswepu udiwarara Atiyawarara nchekwawordpress permalink